I-Dalton on the Lake - Ifulethi (inc. Ibhulakufesi)
Uyemukelwa epharadesi lakho elincane ogwini lweLake Albert...buka ama-pelicans adansa ekushoneni kwelanga kuyilapho ejabulela indawo yokuhlala ewubukhazikhazi obuphelele okuhlanganisa nesidlo sasekuseni sesitayela sasekhaya esivulekile. Imizuzu eyi-10 nje ukusuka ku-Coorong ekhuthazayo, imizuzu engama-90 ukusuka e-Adelaide.
Ifulethi elinezitezi ezimbili liyindawo yesimanjemanje enesitezi esisezingeni eliphansi nendawo yokuhlala ebanzi ekunikeza ukubukwa okuhle phezu kweLake Albert elihle kanye nengadi yekotishi. Isitudiyo esingaphansi futhi sinikeza imibono yechibi ukusuka egcekeni lakho langasese kanye negumbi. Zitike ngesidlo sasekuseni esigcwele sesinkwa esisanda kubhakwa, amaqanda asepulazini nokunye okuningi okuzolungiswa ngesikhathi sakho sokuphumula kanye namabhisikidi enziwe ekhaya ukuze uphuze ikhofi lakho le-plunger.
Ifulethi linendawo yokulala eyi-1 King Size Bed (noma izingoma ezi-2 zenkosi) phansi kanye nenketho yokulala osofa ababili phezulu, kokubili okunelineni likanokusho elomisiwe elinomoya, amathawula nezingubo zokugeza.
Isitezi esingaphansi sinendawo yokuhlala, i-en-suite evulekile, ukuhamba nge-wardrobe futhi iqukethe ikhishi elihlome ngokuphelele elinomshini wokuwasha izitsha, umshini wokuwasha kanye nefriji egcwele kahle kanye ne-pantry ozoyisebenzisa.
Esitezi esiphezulu kunendawo enkulu yokuhlala ebheke enyakatho ethatha kahle ilanga. Hlala kuvulandi futhi ujabulele ukubukwa noma uvule iminyango eshelelayo ukuze uvule isikhala.